Cabsan Jessica Simpson dhalashadii ninkeeda
Jessica Simpson, oo ah 37-jir ah, lama xisaabin khamriga xafladda dhalashada ee ninkeeda Eric Johnson, maalin kale oo 38 sano jir ah, oo ay ku qosleen dadweynaha hortiisa.
Fasaxa dheeraadka ah
Qurxinta Jessica Simpson, oo dhawaan soo ceshatay, iyo ninkeeda Erik Johnson oo ka mid ah saaxiibada habeenkii isniinta ayaa dabaaldegay dhalashadii hore ee kubada cagta, oo 15-kii September ku sugnaa maqaayadda Craig ee West Hollywood.
Eric Johnson ayaa u dabaal-dagay sanadkiisii ​​38-aad
Xisbiga faraxsan wuxuu soconayay lix saacadood, gardaro iyo xaaskiisa oo ka tegay machadka ka hor intaanan la xidhin subaxdii subaxnimo. Labadaas, oo u socday dhinaca gaariga, ayaa ku wareegay Paparazzi iyo Simpson, kuwaas oo si cad u eegay aalkolada, waxay u muuqdeen kuwo ka fog kuwa ugu fiican.
Jessica Simpson markii ay dhalatay ninkeeda
Si aan haboonayn
Jessica, oo leh timo madow oo timo dhar ah, lebbis madow ah oo leh xargaha iyo surwaalka, ayaa si tartiib ah u dhajiyay dheelitirka sare, oo ku tiirsanayd Erik gacanta, nacasnimo qosol leh. Johnson, wuxuu xoojiyay xaaskiisa suxulka, wuxuu isku dayay hawo aan bislaan lahayn, si uu ugu fariisto baabuurka sida ugu dhakhsaha badan ee suuro galka ah ee kamarad iftiimaya.
Waqtiga qaarkood, culeyska dhulka ayaa la wareegay, fanaankiisuna wuxuu ku dhowaad ku soo taagay dhinaca lugta. Saaxiibka ayaa ku habsaday, xiddigta 90-aad ayaa go'aansaday inay tusaan qofkasta oo luqadooda ugu dambeeya.
Dhowr sano ka hor, Simpson wuxuu ku dhuftay dhalada. Rabitaanka miisaanka oo lumiyo, heesaha ayaa maydhay kiniinnada si loo hagaajiyo dheef-shiidka khamriga wuxuuna ku sugnaa rugta baxnaaninta.
Jessica Simpson iyo Eric Johnson
Jessica Simpson ayaa la yaabtay "muuqaalka" ee dharka dharka
12 haween caan ah oo ku guuleystay inay bikradnimadooda ilaaliyaan ka hor arooska
Jessica Simpson ayaa ku faraxsan taageerayaasha sawirada gabadheeda!
Xusuusin, xiddiga Jessica iyo NFL Eric Johnson ayaa si wadajir ah u joogay todobo sanno. Labada qof ee guursaday 2014, laba caruur ah - gabadh 5 jir ah, Maxwell Drew iyo wiilka 4-jirka ah Ace Knute.
Jessica Simpson iyo Eric Johnson carruurta
George iyo Amal Clooney waxay dib ugu noqdeen London ka dib fasaxyada Paris
Emma Watson ayaa la jebiyey saaxiibkii William Knight
Maria Poroshina ayaa dhawaan dhali doonta hooyo ... waa markii afaraad!
Kate Middleton waxay ka qaybgashay furitaanka "Aqalka Ronald McDonald" ee London
Caruurta George Clooney waxay jecel yihiin sida tufaaxa indhaha
Madoobe iyo Lady Gaga oo ka soo horjeeda khilaafka aan kala go'a lahayn: fadeexad?
Britney Spears ayaa markii ugu horeysay la timid Sam Asgari
Jenny Shimizu iyo Angelina Jolie
Amber Hurd ma rabto in uu ka hadlo rabshadaha qoyska dhexdiisa dhaarta
Maamulihii hore ee Johnny Depp ayaa ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay macaamilka ganacsiga
Megan Fox iyo Brian Austin Green ayaa noqday waalidka markii saddexaad
Milos Bikovich waxay la kulantaa matoor Sasa Luss
Hooyo Paris Hilton ayaa ku dhawaaqday uurka Jennifer Aniston
Chris Jenner waa fanaan ka mid ah teendhada circus
Waa maxay faa'iido u lahaanshaha jirka for jidhkeena - isticmaalno cuduro kala duwan
Sidee lumisaa miisaanka leh xarig?
Imisa ayaad ku kaydin kartaa isku darka diyaarinta?
Qodobbada waxtarka leh ee boqoshaada
Charlotte ee microwave
Nidaamka Dutch ee baradho sii kordhaya
Qeybinta dhacdooyinka maskaxda
Maxaa dhacaya haddii wax kasta ay noloshu tahay mid xun?
Marina Vladi iyo Vladimir Vysotsky
Playboy ayaa ku dhawaaqay heesaha ugu caaggan ee 2016ka
Sawirrada qoysaska ee aan dhicin: Guryaha hore ee Gwyneth Paltrow iyo Chris Martin waqti ayay la qaadatay carruurta
Sidee si dhakhso ah u qallajin kartaa cirifka ciddiyaha?
Saliid loogu talagalay miisaanka luminta
Calool xanuunka - Calaamadaha
Prolactin waa caadada
Maalin maaliyadeed oo aan ciyaarayn: 72-sano jir ah Goldie Hawn oo orod ah
Jikada jikada - fikradaha ugu caansan, kuwaas oo ku haboon in ay fiiriyaan
Sidee loo kariyaa maraq farmaajo?
Fashion Hairstyles 2017. Waa maxay timaha timuhu noqon doonaan kuwa ugu mihiimsan sanadka cusub?